वनप्लस and र T टीले एन्ड्रोइड पाई प्राप्त गरेपछि ऑक्सीजनस5.०.१ प्राप्त गर्दछ Androidsis
केहि दिन अघि, OnePlus5र 5T मा Android पाईको क्रमिक कार्यान्वयन। किनकि यो एक आश्चर्यजनक तरिकामा गरिएको छ, यदि तपाईं यी मोबाइलहरू मध्ये कुनै एकको क्यारियर हुनुहुन्छ भने तपाईंले यसलाई प्राप्त गर्नु भएको छैन। जे होस्, एक काउन्टरको रूपमा, फर्मले यी फोनहरूको लागि नयाँ अद्यावधिक पनि तितरबित गर्दैछ, र यो ऑक्सीजनस 9.0.1 हो।
वनप्लस सुरुवात हुँदैछ OxygenOS 9.0.1 तिनीहरूको २०१ flag को फ्ल्यागशिप्समा। अपडेटले अन्तिम समस्या ल्याएको बगहरू ठीक गर्दछ। पूर्ण changelog तल छ हामी तपाईंलाई तल दिन्छौं। पढिरहनुहोस्!
ऑक्सीजनसको यस नयाँ संस्करणलाई धन्यवाद, दुबै मोडेलमा अब उनीहरूको धेरै सेक्सनमा धेरै परिवर्तन र सुधारहरू छन्, यद्यपि, यो अद्यावधिक हो जसले प्रणालीलाई स्थिर गर्दछ र रमाईलो कार्यहरू थप्दैन। विस्तृतमा, के सूचीबद्ध सूचीबद्ध छ:
Wi-Fi जडानको लागि सुधारिएको स्थिरता।
अनुकूलित sRGB प्रदर्शन मोड।
अनुकूलन पठन मोड।
4G VoLTE जडानको साथ समस्या समाधान।
स्क्रिन कास्टि when गर्दा फिक्स अनियमित रिबुटहरू।
पहिले नै अपडेट प्राप्त गर्ने मध्ये एकले साझेदारी गरिएको स्क्रीनशटले देखाउँदछ कि यो आकार १. 1,748 MB छ।
हामीले भनेजस्तै, अपडेट एक अल्छी तरीकामा रोल आउट भइरहेको छजस्तै एन्ड्रोइड पाई। कम्पनीले यसको फोरममार्फत जानकारी गराएको छ कि आजको थोरै प्रतिशत प्रयोगकर्ताले ओटीए मार्फत अपडेट प्राप्त गर्ने छ। त्यसो भए पछि, केहि दिनहरूमा यो संख्या बढ्नेछ र चाँडै सम्पूर्ण समुदायमा पुग्नेछ कि यी मध्ये एउटा टर्मिनलहरूको स्वामित्व हुन्छ। तसर्थ, तपाईं धेरै सावधान हुनुपर्दछ: यसको लागि, तपाईंले केवल समीक्षा गर्नुपर्नेछ, सेक्सनको माध्यमबाट प्रणाली अपडेटहरू, यदि ऑक्सीजन 9.0.1 पहिले नै डाउनलोड र स्थापनाको लागि उपलब्ध छ। हामी सिफारिस गर्दछौं कि उपकरण राम्रोसँग चार्ज गरिएको छ र वाइफाइ नेटवर्कमा जडित छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: एन्ड्रोइडसिस » हाम्रो बारेमा » वनप्लस and र T टीले एन्ड्रोइड पाई प्राप्त गरेपछि ऑक्सीजनस5.०.१ प्राप्त गर्दछ
ग्यालक्सी S10 को पहिलो वास्तविक छवि क्यामेरा होल फिल्टर गरीएको छ